အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ – Page3– For those who love reading
သင်္ခါရသဘောနဲ့သာ ဆင်ခြင်ပါတော့။ သံသင်္ခါရနဲ့ သစ်သား သင်္ခါရတော့ ကွာသပေါ့။ ကျနော်တို့အဖြစ်ကတော့ ရွှံ့သင်္ခါရပေါ့လေ…
စောစောက မိတ်ဆွေတယောက်ကို ပြန်ကြားရေးသားလိုက်ဖြစ်သွားတဲ့ ကျနော့်စကားပါ။
မိတ်ဆွေက “ခင်မောင်ရင်”ရဲ့ “နှမလက်လျှော့နေလေတော့…”ဇာတ်ကားကို ကြည့်ချင်တယ်၊ အခုလောက်ဆို ပျက်စီးလောက်ပြီပေါ့။ နိုင်ငံခြားကားဟောင်းတွေကျတော့ မပျက်စီးဘူးပေါ့။
အဲဒီ့မိတ်ဆွေကို ပြန်ကြားရေးသားဖြစ်ခဲ့တဲ့ စကားက အဖွင့်က စကား။
တကယ်တော့ “ထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်း”နဲ့ စီးပွားရေးက တိုက်ရိုက်အချိုးကျပါတယ်။
အလွယ်ဆုံး ဥပမာ ပေးရရင် ဘိုးဘွားအမွေအနှစ်တခုခု ဆိုပါစို့။ အစဉ်အဆက် ချမ်းသာတဲ့ မိသားစုက ထိန်းသိမ်းနိုင်တယ်။ တအားကို ဆင်းရဲတဲ့မိသားစုဆိုရင်တော့ ဘယ်လောက် တန်ဖိုးရှိတဲ့ အမွေအနှစ် ဖြစ်နေပါစေ၊ ဈေးကောင်းရရင် ချရောင်းလိုက်မှာပါပဲ။ မန်းရွှေမြို့လယ်က နေရာကောင်းတွေ မန်းသူ မန်းသားတွေ မပိုင်တော့တာ။ ရန်ကုန် အင်းယားမြိုင်၊ ရွှေတောင်ကြား၊ သံလွင်လမ်း၊ အင်းလျားလမ်း၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းမှာ တချိန်တုန်းက ခြံကျယ်ကြီးတွေ၊ အိမ်ကြီး အိမ်ကောင်းတွေကရော အခု ဘယ်သူတွေ ပိုင်နေကြပြီလဲ။ သီလစောင့်ဖို့ အသာထား၊ ဘိုးဘွားအမွေအနှစ် ထိန်းသိမ်းဖို့ဆိုတာတောင် အူမက တောင့်ပေဦးမှ။
ဈေးကောင်းရလို့ ရောင်းတာက အထည်ကြီးပျက်တွေပေါ့။ လူဆင်းရဲတွေကျတော့ ရှိတာ ထုတ်ရောင်း။ သတင်းစာဟောင်း၊ ပုလင်းခွံ၊ ဘူးခွံ၊ ပလတ်စတစ်အိပ်၊ သံတိုမယ်နတောင် အမှိုက် ဖြစ်မသွားဘဲ ငွေဖြစ်တဲ့ ခေတ်တခေတ်ကို ကျနော်တို့ ဖြတ်သန်းခဲ့ရဖူးပါတယ်။ ဘီစကွတ် အကျိုးအပဲ့တွေကို တန်းစီဝယ်ရ၊ တဆင့်ခံ ပြန်ရောင်းသူတွေ လက်က ပြန်ဝယ်ရတဲ့ ခေတ်လည်း ရှိခဲ့တယ်။
ဖုန်းကတ်တကတ်ကို ပင်ရင်းကနေ ဈေးကြီးပေးဝယ်ရပြီး ဘိုင်ကျတော့ ပြန်ရောင်းတဲ့အခါ ၃၄ သိန်းတောင် ကိုယ်တိုင် မြတ်ဖူးတယ်။ ရောင်းလိုက်ရတုန်းက မျက်ရည်စက်လက်။ ပထမဆုံးအသုတ် ဂျီအက်(စ်)အယ်(မ်)ဖုန်း။ နံပါတ်လေးက လှမှလှ။ ကျနော့်နာမည်နဲ့ ဖုန်း။ ဘယ်လက်လွှတ်ချင်ပါ့မလဲ။ ကိုင်ထားချင်တာပေါ့။ ကျနော့်ဇနီးနာမည်နဲ့ ဝယ်ခွင့်ရတဲ့ ဖုန်းလေးဆို မြင်တောင် မမြင်ဖူးလိုက်ဘူး။ ဝယ်ခွင့်လက်မှတ်ကို ၁၅ သိန်းအမြတ်နဲ့ ရောင်းလိုက်ရတာ။ ဘဝတွေက အဲသလို။ ဒါတောင် ကျနော်ဆို လူလတ်တန်းစားထဲ နည်းနည်း ပါမယ် ထင်ပါတယ်။
လူမတန် ကံချ သင်္ခါရ
ကိုယ့်မရှိလို့ ရှိတာ ထုတ်ရောင်းလိုက်ရတဲ့အခါ သင်္ခါရ သဘောကို နှလုံးသွင်းရတယ်။
ကျနော့်ဆီမှာ ဘိုးဘွားအမွေအနှစ်ဆိုလို့ ဒက္ခိဏသာခါ ဘုရားဆင်းတုလေး နှစ်ဆူကလွဲလို့ ဘာမှ မရှိတော့ဘူး။ (ယုတ်စွအဆုံး… ဘာမဆိုင် ညာမဆိုင် စကားစပ်ခိုက် ပြောပြရရင် ကျနော် ကလေးတုန်းက ဓာတ်ပုံတောင် မရှိတော့ဘူး။ ကလေးတုန်းက ဓာတ်ပုံတင် ဘယ်ကမလဲ ကျနော့်အသက် ၂၈ နှစ် မတိုင်ခင်က ဓာတ်ပုံတောင် မရှိတော့တာ။ အဖေ၊ အမေနဲ့ မိသားစု ဓာတ်ပုံလည်း မရှိဘူး။ အမေက စိတ်ပေါက်တိုင်း ဓာတ်ပုံတွေကို လှီးပစ်တယ်။ အဖေ့ကို စိတ်ပေါက်ရင် အဖေနဲ့ တွဲရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံထဲက အဖေ့ ပုံတွေ လှီးထုတ် ဖျက်ဆီးတယ်။ ကျနော့်ကို စိတ်ပေါက်ရင် ကျနော့်ဓာတ်ပုံတွေ ဖျက်ဆီးတယ်။ သူ့ခမျာ နိုင်လို့ရတာ ဆိုလို့ ဓာတ်ပုံပဲ ရှိတော့တာကိုးဗျာ။ အဲတော့ကာ မေမေ ကွယ်တော့ ကျနော့်လက်ထဲ ဘာဓာတ်ပုံမှ မကျန်။)
အဲတော့လည်း တချို့ပုံတွေ သတိရမိတဲ့အခါ “သင်္ခါရ”သဘောကို နှလုံးသွင်း ဆင်ခြင်ရတယ်။
သြော်… သင်္ခါရ၊ သင်္ခါရ
လူ့အသက်ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်းကရော… လူဖြစ်တာချင်းအတူတူ ချမ်းသာတဲ့ နိုင်ငံမှာ လူဖြစ်သူက အသက်ရှည်ရှည် နေရတယ်။ ဆင်းရဲတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ အသက်တိုကြတယ်။ ဒါ အရှင်းကြီးပဲ။
အဲတော့ ထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်း မရှိတော့တဲ့အခါ သင်္ခါရကို ဆင်ခြင်ရတယ်။
ဟိုနေ့က မောင်သစ်မင်း၊ စာရေးဆရာ ဒါရိုက်တာ မောင်ဝဏ္ဏ၊ စာရေးဆရာ မင်းလူ၊ အဆိုတော် မင်းမင်းလတ်၊ စာရေးဆရာ မင်းသား အဆိုကျော် ဒါရိုက်တာ ဝင်းဦး၊ ဂီတစာဆို စန္ဒယား ချစ်ဆွေ၊ စန္ဒယားချစ်မောင်၊ စန္ဒယားလှထွတ်၊ ရွှေပြည်အေး၊ ချိုတေးဆက် ကိုအောင်ကိုး၊ ပုသိမ်မောင်စိမ်းသူ၊ မောင်စစ်ငြိမ်း၊ အဉ္ဇလီမောင်မောင်စတဲ့ သူတွေကို လွမ်းတဲ့အကြောင်း ရေးလိုက်မိတဲ့ အောက်မှာ တယောက်က လာရေးပါတယ်။ သည်လူတွေကို သူ့အိမ်က သားတွေကို မေးကြည့်တော့ မသိကြတော့ဘူးတဲ့။
ဆင်းရဲတော့ သေသူတွေကို နာမည်သက် ဆက်ရှင်အောင် ထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်းလည်း ကျနော်တို့မှာက မရှိတော့ဘူး။ မာတင် လူသာကင်း၊ အဆိုတော် ရေးချား(လ်)(ဇ်)၊ ဖရက်ဒီ မာခယူရီ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေး ဗျူရို (FBI) ကို တည်ထောင်ခဲ့သူ အက်ဒဂါ ဟူးဗှား စတဲ့ နာမည်ကြီးတွေကို နာမည်မသေအောင် ဟောလီးဝု(ဒ်) ဓာတ်ရှင်သမားတွေက လုပ်ပေးနိုင်တယ်။ နာမည်မရှိလှတဲ့ အိမ်ဖြူတော်ရဲ့ အိမ်တော်ဝန်ကိုတောင်မှ လူသိအောင် လုပ်ပေးနိုင်ကြတယ်။ ချမ်းသာလို့ပေါ့ဗျာ။
ကျနော်တို့မှာတော့… … …
အဲတော့လည်း မြသန်းတင့်ဆိုတာ မိန်းမလားတို့၊ ခင်လင်ကျာတို့ ဖြစ်ကုန်ပေတော့တာ မဆန်းပါဘူး။
အိမ်း… ဒါလည်း သင်္ခါရ။
သို့သော် သင်္ခါရချင်းအတူတူ သံသင်္ခါရနဲ့ သစ်သား သင်္ခါရတော့ ကွာသပေါ့။ ကျနော်တို့အဖြစ်ကတော့ ရွှံ့သင်္ခါရပေါ့လေ…
(ပုံက https://zenstudiespodcast.com/impermanence/ မှ စီးပွားဖြစ် သုံးတာ မဟုတ်တဲ့အတွက် စိတ်ရှင်းရှင်းနဲ့ မိတ္တူယူထားတဲ့ ပုံဖြစ်ပါတယ်။)
Author lettwebawPosted on 27 August 2019 27 August 2019 Categories ThoughtsLeaveacomment on ရွှံ့သင်္ခါရ
ရလိုမှု တခုတည်း မကြည့်ကြပါနဲ့…
တဖက်က တော်တော့်ကို လပ်နေရှာကြတာကလား
(တိုင်းရင်းသားအကုန်လုံး ပါဝင်တယ်လို့ သတ်မှတ်ထားသော) မြန်မာမဟုတ်တဲ့ ဗမာအားလုံး မဟုတ်တောင် အတော်များများဟာ တဖက်လပ်တွေ ဖြစ်ကုန်ကြပြီလို့ ပြောရင်မလွန်ဘူး ထင်ပါတယ်။
ကျနော့် ဖွဘုတ် ကလျာဏမိတ္တတွေထဲမှာ အခွန်ဦးစီးက ကြီးကြီးမာစတာတွေ ရှိတယ်။ သူတို့ထဲက တချို့ဟာ အခွန်ဆောင်ရမှာ နိုင်ငံသားတိုင်း တာဝန်ဆိုတဲ့ ဘုတ်အုပ်ကြီးထဲက စာတွေကို ဇာချဲ့ပြီး ဖွဘုတ်မှာ တင်တယ်။ အခွန်ပေးရေးအတွက် ဖွဘုတ်ကတဆင့် စည်းရုံး လှုံ့ဆော်တယ်ပေါ့။ သူတို့ တရားပါတယ်။ အခွန် လျာထားချက်အတိုင်း အပြည့်အဝ ကောက်ခံနိုင်မှ သူတို့ ဖင်ထိုင်ခုံလေး မြဲနေမှာကိုး။ ပြောပေါ့။ ရေးပေါ့။
သို့သော်… သည်မောင်တွေ တဖက်လပ်ပုံက အခွန်ထမ်း လူထုဘက်ကတော့ တစက်ကမှ တွေးဖော်မရတာပဲ။
တရက်ကတော့ မနေနိုင်လို့ ပြောမိသွားတယ်။ စခယ်(န်)ဒီ နေးဗှီးယန်းနိုင်ငံတွေမှာ အခွန်ကို ဝင်ငွေရဲ့ ၄၀ % ဝန်းကျင်၊ တချို့ဆို အဲ့ထက်တောင် များသေး၊ ပေးရတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ့ အခွန်ထမ်း လူထုအတွက် အိမ်ရာ မပူရ၊ အိုနာစာ ရံပုံငွေ မပူရ၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ သွားလာရေး မပူရအောင် အစိုးရက လုပ်ဆောင်ပေးထားတယ်။ အဲဒါမျိုးသာ ဖြစ်လို့ကတော့ ကျနော်တို့လည်း သိပ်ပေးချင်တာပေါ့ဗျာ။
ရွှေနံနံကြီးမှာကျတော့ ကျနော်တို့ ပေးလိုက်တဲ့ အခွန်အများစုက နှစ်စဉ် ရသုံးခန့်မှန်းခြေ ငွေစာရင်း ထွက်လာတဲ့အခါ ဘယ်ဌာနကို အများဆုံး ရောက်သွားသလဲ။ လူထုနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ လူမှုဖူလုံရေးအတွက် ဘယ်နှရာခိုင်နှုန်းစီ ရောက်သလဲ။ ဒါတွေကို အများသိမို့ မီးမောင်းထိုးမပြချင်ပါဘူး။ သို့ပေတည့် အဲဒီ့တချက်နဲ့တင် အခွန်က ပေးချင်စရာ သိပ်မကောင်းတာကို ထိုင်ခုံမြဲချင်သူတွေ မမြင်ရှာကြတာ သိပ်သနားစရာ ကောင်းတာပဲ။
သည့်ထက်ပိုတဲ့ အချက်ကတော့ ဘယ်ဌာနဆိုင်ရာသွားသွား၊ ဘာကိစ္စအတွက်သွားသွား၊ ဘယ်လောက်ပဲ သေးငယ်တဲ့ ကိစ္စဖြစ်နေပါစေ၊ ကျနော်တို့ ပေးထားတဲ့ အခွန်က ဖြစ်လာတဲ့ ငွေတွေကို လစာအဖြစ် စားသုံးနေသူ ဂိတ်စောင့်မှသည် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အထိက လူထုကို ကူညီပေးမယ်၊ စိတ်ချမ်းသာအောင် အတတ်နိုင်ဆုံး ဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်မျိုးတွေနဲ့ မဟုတ်ဘဲ သဟောက်သဟ လုပ်ချင်တဲ့ ဉာဉ်အပြည့်နဲ့ ဖြစ်နေတာကြီးဟာ အင်မတန် ခါးသီးလှပါတယ်။
လူထုဝန်ထမ်းလို့ ပြောင်းခေါ်သင့်တာ ကြာ
အမှန်က သူတို့တွေဟာ လူထုဝန်ထမ်း (Public Servants) တွေပါ။ လူထုကို အလုပ်အကျွေးပြုရမှာပါ။
ဒါပေသည့် ဗမာလိုကျတော့ လူထုဝန်ထမ်းလို့ မခေါ်ဘဲ အစိုးရဝန်ထမ်း (Government Servants) လို့ ခေါ်လိုက်ကြတယ်။ အဲဒီ့မှာတင် သူတို့ဟာ လူထုကို အလုပ်အကျွေးမပြုတော့ဘဲ အစိုးရကိုသာ အလုပ်အကျွေးပြုနေကြတဲ့၊ တနည်းပြောရရင် အစိုးရ အလိုကျ မှန်မှန် မှားမှား၊ မျက်စိမှိတ် ကပြအသုံးတော်ခံနေကြတဲ့ မျက်ကန်းဝန်ထမ်းတွေ ဖြစ်ကုန်ကြတယ်။ စုံလုံး မကန်းဘူးဆိုတောင် အထက်က ပြောခဲ့တဲ့ အခွန်ပေးရေး လှုံ့ဆော်ဆောင်ရွက်နေကြသူတွေလို တဖက်လပ်တွေ ဖြစ်ကုန်ကြပါတော့တယ်။
အဲသလို ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ မလွှဲသာတိုင်း ရင်ဆိုင်နေကြရတဲ့ လူထုက အခွန်ကို ကြည်ကြည်သာသာ ပေးချင်ကြပါ့မလား။ ငါတို့ ပိုက်ဆံလည်း စားနေသေး၊ ငါတို့အပေါ်လဲ မောက်မာသေးလို့ပဲ တွေးကြမှာပါ။ အဲဒါကို အခွန်က တာဝန်ရှိသူတွေ မြင်သင့်တယ်။ အခွန်ပေးစေချင်ရင် ပေးပျော်မယ့် အခင်းအကျင်းကို အရင်ဆုံး ဖန်တီးဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ အဲလိုမဟုတ်ဘဲ ပုဒ်ထီး ပုဒ်မတွေနဲ့ ကိုင်ကိုင်ပေါက်နေရင်တော့ လက်နက်ပြ ငွေတောင်းတဲ့ လုပ်ရပ်နဲ့ မနီးရိုးစွဲသာ ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
အခုလည်း လာပြန်ပါပြီ။ လျှပ်စစ်ခွန်… အလွယ်ပြောရင် မီတာခပေါ့ဗျာ။
ဈေးတက်တာ ပြဿနာ မဟုတ်၊ တက်ပုံ လွဲခဲ့တာ
မီတာခတွေ ဈေးတက်တုန်းက ကျနော် တလုံးတပါဒမျှ မပြောခဲ့ဘူး။ ဈေးတက်တာကို ဘယ်သူ သဘောတူတူ မတူတူ၊ ကျနော် သဘောတူတယ်။
အမှန်က အခုလို ဗြုန်းခနဲ တက်ရမှာ မဟုတ်ဘဲ ဟိုး ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်ကတည်းက ငါးပြားတိုး၊ ဆယ်ပြားတိုးနဲ့ ဖြည်းဖြည်းချင်း တိုးတိုးသွားရမှာ။ ပြားခေတ် ကုန်သွားတဲ့အခါ တကျပ်တိုး၊ နှစ်ကျပ်တိုးပေါ့။ ကျပ်ခေတ် ကုန်တော့လည်း တဆယ်တိုး၊ နှစ်ဆယ်တိုးနဲ့ နှစ်ပေါင်း ၄၀ လောက်အတွင်းမှာ ဖြည်းဖြည်းချင်း မသိမသာသာ တိုးခဲ့ရင် ခုလောက် ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် ဖြစ်စရာမလိုဘဲ လူထုလည်း အခုနှုန်းထားကို ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ ပေးနေကြမယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။
ထားပါတော့… အခုကျတော့လည်း အများ သဘောတူတူ မတူတူ၊ နှုန်းထားသစ်နဲ့ မီတာခ စာရွက်က ရောက်လာပါပြီ။ ဈေးတက်တာကို အစောကြီးကတည်းက သဘောမျှသူ ကျနော်တို့ မိသားစုအတွက်က ပြဿနာ မရှိပါဘူး။ မီတာစာရွက်လေးတွေ ဓာတ်ပုံရိုက်ပြပြီး နတ်သံနှောစရာလည်း အကြောင်း မရှိပါဘူး။
ပြောစရာ ဖြစ်လာတာက အထက်က ပြောခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာပါပဲ။ လျှပ်စစ်ဌာနက လူထုဆီက ပိုက်ဆံလည်း လိုချင်သေးတယ်၊ လူထုက ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ ပေးချင်စရာကောင်းနေအောင် ဖန်တီးမထားဘဲ လူထုကို ဒုက္ခပေးတဲ့ စနစ်ကြီးနဲ့ စခန်းသွားပုံပါ။
သည်လ မီတာခက အများနည်းတူ ကျနော်တို့အတွက် နှစ်ဆ တက်သွားပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့… ၂ သိန်း ၆ သောင်းကျော် ကျသင့်ပါတယ်။
အဟဲ… သွားဆောင်တော့ ဘာဖြစ်တယ် မှတ်တုံး။
နှစ်သိန်းကျော်နေလို့ ဘဏ်မှာ သွားဆောင်ပါတဲ့။ ဟုတ်ကဲ့… သည်အထိက လက်ခံနိုင်ပါတယ်။
သို့သော် ဘဏ်မှာဆောင်ပြီးရင် ဘဏ်ချလံကို သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရုံးဆီ ပြန်လာပြပါတဲ့။
ဟား… တယ်ဟုတ်ပါလား။ အတော် အဆင်ပြေအောင် စီမံထားတာပဲ။
အကုန်လုံး အထက်စီးကချည်းပဲ။ သည်လိုလုပ်ရင် လုပ်၊ မလုပ်ရင် မီးဖြတ်မယ်ပေါ့။ ဟုတ်တယ်လေ… သူတို့ ပြောတဲ့အတိုင်း ဘဏ်မှာ မဆောင်ရင် မီတာခ မပေးဘူး၊ မီးဖြတ်လို့ ရတယ်။ ဒါမှမဟုတ် မြို့နယ်ရုံးဆီ ဘဏ်ချလံ ပြန်လာမပြဘူးဆိုရင်လည်း သူတို့စာရင်းမှာ မီတာခ မဆောင်ထားဘူး၊ ဒါဆိုလည်း မီးဖြတ်လို့ ရတယ်။ အဲလို မဟုတ်ဘူးလား။
လူထုကို ကောင်းကောင်း ဒုက္ခပေးထားတဲ့ ကျင့်စဉ်ကောင်း ကျင့်စဉ်မြတ်ကို အခုလမှာ စတင် ရင်ဆိုင်ရပါတော့တယ်။
မီးခွန်၊ ရေခွန်၊ ဘာခွန်၊ ညာခွန် ကောက်ချင်သူတွေအနေနဲ့ အခြေခံ နီတိလေးတချက်တော့ သိထားသင့်မယ် ထင်ပါတယ်။
“သူတပါး အိတ်ကပ်ထဲက ပိုက်ဆံကို လိုချင်ရင် အဲဒီ့လူက ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ ပေးချင်လာအောင် ကိုယ့်ဘက်က အရင် ပြင်ဆင် လုပ်ကိုင်ရတယ်”ဆိုတဲ့ နီတိပါပဲ။
မဟုတ်လို့ကတော့ ခင်ဗျားတို့ဟာ မသထာရေစာ အပင်းအဆိပ်တွေကို မျိုနေကြသူတွေ ဖြစ်နေကြမှာပဲ။ သည်ဘဝမှာရော၊ ဘဝဆက်တိုင်းမှာပါ ခင်ဗျားတို့အတွက် ဝဋ်နဲ့ ငရဲက အမြဲ ကပ်လိုက်နေမှာလေးလည်း သတိရကြစေချင်ပါတယ်။ သည်ဘဝကို ထည့်ပြောရတာက ခင်ဗျားတို့သည်လည်း မင်းခစားတွေမို့ ကမ်းနားသစ်ပင်တွေဆိုတာ မမေ့စေချင်လို့ ထည့်ပြောလိုက်တာနော်။
လူထုအိတ်ကပ်ထဲက ပိုက်ဆံကို လိုချင်ရင် တခြားဟာ အသာထားဦး၊ ပေးချေရတဲ့အခါ လူထုမှာ ဝန်မပို ဝန်မပိဘဲ လွယ်ကူ အဆင်ပြေသက်သာမယ့် နည်းလောက်တော့ အရင်ဦးဆုံး ဖန်တီးသင့်တဲ့အကြောင်း…
သိစိတ်နဲ့ ဖြစ်စေ၊ မသိစိတ်နဲ့ဖြစ်စေ လူထုကို ဒုက္ခပေးသူ မောင်မင်းကြီးသားအပေါင်း သက်ရှည်ကျန်းမာ ဘေးဘယာ ဝေးကွာကြပါစေသား…
Author lettwebawPosted on 17 August 2019 Categories Discussion, ThoughtsLeaveacomment on ရလိုမှု တခုတည်း မကြည့်ကြပါနဲ့…
လုပ်သူ တရား၊ ခံသူ မှားဆိုတဲ့ ရွှေတလွဲ အတွေးအခေါ်
မိန်းမတွေ မပေါ့်တပေါ်ဝတ်လို့၊ ဟိုဖော်သည်ဖော်ဝတ်လို့ မုဒိန်းမှု ဖြစ်ရတာဆိုတဲ့ အူကြောင်ကျား အတွေးအမြင်ဟာ မြန်မာပြည်မှာသာမက တကမ္ဘာလုံးမှာ အပမှီ စွဲကပ်နေတဲ့ “ခံရသူသာ အပြစ်ရှိကြောင်း” တနည်းပြောရင် “ကျူးလွန်သူတွေ မလွန်ကြောင်း” ဆင်ခြေသက်သက်မျှသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ့အမြင်က မိန်းမတွေမှာလည်း ရှိတယ်။ ယောက်ျားတွေမှာတော့ အဲသလို အဝတ်အစား လော်လီတဲ့ မိန်းမတွေကိုသာ အပြစ်ဖို့ချင်စိတ်က ပိုတောင်များလေသပေါ့။
အဝတ်အစားလော်လီတဲ့ မိန်းမတွေကြောင့် ဖြစ်ရတာလို့ ပြောချင်သူတိုင်း အောက်ပါ မေးခွန်းတွေကို ဖြေကြည့်စေချင်ပါတယ်။
(၁) မုဒိန်းမှု ကျူးလွန်သူ ဘယ်နှဦးနဲ့ တွေ့ဆုံ မေးမြန်း ပြောဆိုဖူးပါသလဲ။
(၂) မုဒိန်းမှု စုစုပေါင်း ဘယ်နှမှုမှာ အဝတ်အစားလော်လီတဲ့ မိန်းမကြောင့် ဖြစ်ရတဲ့ အမှုက ဘယ်နှမှု ရှိပါတယ်လို့ ခိုင်လုံတဲ့ အချက်အလက် အထောက်အထား ထင်ထင်ရှားရှား ရှိပါသလား။
(၃) တကိုယ်လုံး လုံနေအောင် အမည်းရောင်နဲ့ အထပ်ထပ် ဝတ်ထားတဲ့အပြင် မျက်စိနှစ်လုံးသာ ဖော်ပြီး ခေါင်းမြီးခြုံထားတဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် အမျိုးသမီးတွေ မုဒိန်းလုံးဝ အကျင့်မခံရတာမျိုး ဘယ်နားမှာ ဖတ်ဖူးပါသလဲ။ ဘာအထောက်အထား ရှိပါသလဲ။
(၄) မွေးကင်းစ ကလေးတွေ၊ ငါးနှစ်မပြည့်သေးတဲ့ ကလေးတွေ၊ အရွယ်မရောက်သေးသူတွေ၊ အမယ်ကြီးတွေရော မုဒိန်း အကျင့်မခံကြရဘူးလား။ အဲဒီ့ ကလေးတွေ၊ အမယ်ကြီးတွေ ဝတ်ပုံစားပုံက ဘယ်နေရာမှာများ လော်လီနေလို့ပါလဲ။ ဘာတွေ ပေါ်ပြီး ဘယ်အစိတ်အပိုင်းတွေက ရာဂကို နိုးကြွစေလို့ပါလဲ။
(၅) စိတ်ကယောက်ကယက်ဖြစ်နေသူ၊ စိတ်မနှံ့သူ မိန်းမတွေလည်း အကျူးလွန်ခံရတာ ကြားဖူးကြမှာပါ။ အဲသလို အမျိုးသမီးတွေကရော ဘယ်လို ဝတ်စားနေထိုင်တာ တွေ့ဖူးပါသလဲ။
အင်မတိ အင်မတန် ထူးခြားတဲ့ အချက်တချက်ကို ထောက်ပြပါမယ်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပင်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်ရဲ့ စစ်တမ်းအရ အမေရိကန် စစ်တပ်မှာ (စက်တင်ဘာလမှာ ကုန်ဆုံးတဲ့) ၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာရေး နှစ်တနှစ်တာအတွင်းမှာ တပ်ဖွဲ့ဝင် ၂ သောင်း ၆ ထောင်တိတိဟာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ မဖွယ်မရာပြုခံရတဲ့ သားကောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့… အမေရိကန် စစ်တပ်မှာ စစ်သားတွေသာမက စစ်သမီးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အများစု အလွယ် ကောက်ချက်ချမှာကတော့ သည်အရေအတွက်မှာ ခံရသူ စစ်သမီးက ပိုများမယ်လို့ပါပဲ။
တကယ်တမ်းမှာ ခံရသူ တသောင်း လေးထောင်လောက်ဟာ စစ်သား ယောက်ျားကြီးတွေ ဖြစ်နေကြပြီး ကျန်တဲ့ တသောင်း နှစ်ထောင်လောက်ကသာ စစ်သမီး အမျိုးသမီးတွေ ဖြစ်နေပါတယ်။
ကဲ… အဖော်အချွတ်ရယ်၊ စစ်ဝတ်စုံရယ်၊ မုဒိန်းမှု၊ ဒါမှမဟုတ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ မဖွယ်မရာပြုမှုရယ်က သည်ကိစ္စမှာ ဘယ်လို ဆက်စပ်နေမလဲဆိုတာ ဉာဏ်လေး အနည်းအပါး ရှိရင်ကို တန်းခနဲ မြင်နိုင်လိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။
သည်အစီရင်ခံစာမှာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ နောက်တချက်က ယောက်ျားချင်း ကျူးလွန်သူ မဆိုစလောက် အနည်းငယ်မျှသာ လိင်တူချင်းတပ်မက်သူ ဖြစ်နေပြီး အများစုကတော့ “ထောင်ထဲမှာ ယောက်ျားချင်း မုဒိန်းကျင့်တာနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်တွေချည်းသာ”ဆိုတဲ့ အချက်ပါပဲ။ (ရည်ညွှန်း https://bit.ly/2KGN6nV)
ဒါက အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမို့လို့ သူတို့ စစ်တပ်ထဲက ကိစ္စကို တရားဝင်ဖော်ချ ဖွင့်ထုတ်ထားတာပါ။
ဗြိတိန်စစ်တပ်မှာလည်း အလားတူ ဖွင့်ထုတ်ထားတာ ရှိပါတယ်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ လိင်ပိုင်း မဖွယ်မရာ ပြုမှုပေါင်း ၁၅၃ မှု စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်နဲ့စာရင် အမှု ၃၅ % တိုးလာတယ်လို့ ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
အဲဒီ့ စစ်ဆေးမှု ၁၅၃ မှုမှာ မသင်္ကာသူ (စွပ်စွဲခံရသူ) ၁၆၀ ပါပါတယ်။ စွပ်စွဲခံရသူ ၁၅၀ က ယောက်ျား၊ မိန်းမက ၂ ယောက်၊ မည်သူမည်ဝါဆိုတာ မဖော်ထုတ်ထားသူက ၈ ဦး ပါဝင်ပါတယ်။ ခံရသူက ၁၄၀၊ အဲဒီ့ထဲမှာ မိန်းမက ၁၀၈ ယောက်၊ ယောက်ျားက ၂၅ ယောက်၊ ကျန် ၇ ယောက်က မသိသူ၊ ဒါမှမဟုတ် ကျား-မ ခွဲခြားသတ်မှတ်ဖော်ပြထားခြင်း မရှိသူပါတဲ့။
အဲဒီ့အမှုတွေထဲက ၇၁ မှုဟာ သွင်းဝင်မှု မပါဝင်တဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ မဖွယ်ရာမှုဖြစ်ပြီး မုဒိန်းမှုကတော့ အမှု ၃၀ ရှိပါသတဲ့။
သည်နှစ် ၂၀၁၉ မတ်လ ၂၈ ရက်နေ့မှာ ဗြိတိန် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ တပ်တွင်း လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျူးလွန်မှုများ အစီရင်ခံစာကို https://bit.ly/2GZLRiC ကနေ ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ကိုင်း… ဒါလည်း စစ်တပ်မှာ ဖြစ်တာပဲ။ ဘယ်နေရာမှာ သွားပြီး မပေါ့်တပေါ်တွေ မလုံ့တလုံတွေ ဝတ်နိုင်ကြမှာတဲ့လဲ။
ယောက်ျားခံရရင် မုဒိန်းမှု မမြောက်တာကလည်း တပြဿနာ
ထောင်တွေထဲမှာ၊ ယောက်ျားများ ကြီးစိုးရာ တပ်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ယောက်ျားလေးဆောင်တွေမှာ လိင်ပိုင်းမဖွယ်မရာမှုတွေ၊ မုဒိန်းမှုတွေ ဘယ်လောက် ဖြစ်နေသလဲဆိုတာ ကျနော်တို့ မသိပါဘူး။ သတင်းပို့တာ၊ တိုင်တန်းတာ မရှိလို့ အဲဒါမျိုးတွေ ကျုပ်တုိ့ဆီမယ် လုံးလုံး မရှိဘူးလို့ ဘယ်သူမှ မပြောနိုင်တာလဲ အသေအချာပါပဲ။
မိန်းမတွေကိုက လွန်လို့ပါလို့ ပြောရတာ တယ်လွယ်သကိုး
မုဒိန်းမှု ကျူးလွန်နေသူတွေထဲမှာ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေ၊ ကျောင်းဆရာတွေ၊ အုပ်ထိန်းသူတွေ၊ ဖခင်တွေ၊ အကိုတွေ၊ ဆွေမျိုးဉာတိတွေ၊ အိမ်နီးချင်းတွေ၊ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေ၊ အသိအကျွမ်းတွေ ပါပါတယ်။ အနည်းစုကသာ သူစိမ်းပြင်ပြင်တွေ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
ယောက်ျားတွေပဲ အစဉ်အဆက် ထိပ်ကနေခဲ့တဲ့ လောက၊ ကျား-မခွဲခြားမှု တွင်ကျယ်လွန်းတဲ့လောကမှာတော့ ကျူးလွန်သူကိုထက် ခံရသူကို ပိုအပုပ်ချကြတဲ့ ရာဇဝတ်မှုဟာ မုဒိန်းမှုလို့ ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ မုဒိန်းအကျင့်ခံလိုက်ရဦးတောင် အကျင့်ခံရသူ မိန်းမက ရေငုံနေမယ်ဆို သူ့ဂုဏ်သိက္ခာ သူထိန်းထားနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ အစွဲကြီးကလည်း မြဲနေပေတာကိုး။
ယောက်ျားတွေရဲ့ သရဲမရဲစီးနေတဲ့ တဏှာရမ္မက်စိတ်၊ ဘီလူးသဘက်စိတ်ကို ဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့ မိန်းမကို အပြစ်တင်တာက သိပ်လွယ်တယ်လေ။
ဒါနဲ့ပဲ သူ့ရာဂကို နှိုးဆွနေတဲ့ မိန်းမကိုသာ အပြစ်ပေးသင့်တယ်ဆိုတဲ့ ဆင်ခြေကြီးက ခေတ်စားနေပြီး မိန်းမတွေ မပေါ့်တပေါ် ဝတ်လို့သာ ဖြစ်ရတာဆိုတဲ့ ရွှေတလွဲ အမြင်ကြီးကို ကိုင်စွဲသူတွေ ကိုင်စွဲလို့ ကောင်းနေကြတော့တာပါပဲ။
Author lettwebawPosted on 13 August 2019 Categories Discussion, Information, Psychology, Sexual AbuseLeaveacomment on လုပ်သူ တရား၊ ခံသူ မှားဆိုတဲ့ ရွှေတလွဲ အတွေးအခေါ်
မနေ့က စကားစုသစ်တစု မျက်လုံးထဲကို တိုးဝင်လာတယ်။ Patriotic Journalism တဲ့။ မျိုးချစ် စာနယ်ဇင်း (ပညာ) လို့ ဘာသာပြန်ရမလား မသိ။
ဒါနဲ့ အိမ်စာ နည်းနည်း လုပ်ကြည့်မိရပါတယ်။
တောင်အာဖရိကနိုင်ငံရဲ့ စတုတ္ထမြောက် သမ္မတ ဂျေးခါ့(ဘ်) ဇူးမား စတဲ့ ဇာတ်လမ်းလို့ တနေရာမှာ တွေ့တာနဲ့ ဖတ်ကြည့်ပြီး သဘောကျလို့ အဲဒီ့ဆောင်းပါးလေးထဲက နည်းနည်း ဘာသာပြန်ပေးပါရစေ။ ခေါင်းစဉ်ခွဲတွေက မူရင်းမှာ မပါပါဘူး။ စာဖတ်ရတာ သွက်အောင် ကျနော်ထည့်ထားတဲ့ ခေါင်းစဉ်လေးတွေပါ။
တချို့အကြောင်းအရာ၊ ဥပမာ၊ ဒေါက်တာ ဂျော်(န်)ဆင်(န်) ဖွင့်ဆိုချက် ပြောခဲ့တဲ့ ရက်စွဲ၊ လန်ဒန်ဖျော်ဖြေပွဲမှာ အဆိုတော် ပြောခဲ့တဲ့စကားစတာတို့ဟာ မူရင်းမှာ မပါပါဘူး။ ကျနော့်ဘာသာ အိမ်စာလုပ်ရင်း တွေ့တာလေးတွေကို ဖြည့်ထည့်ထားတာလည်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တောင်အာဖရိကနိုင်ငံရဲ့ စတုတ္ထမြောက် သမ္မတ အယူတိမ်းသွားပုံ
သူက မက္ကဆီကို စာနယ်ဇင်းဟာ မျိုးချစ်စိတ်ရှိတယ်။ မက္ကဆီကိုမှာ ရာဇဝတ်မှု ထူပြောပေမယ့် သူရောက်ခဲ့တုန်းကဆို မက္ကဆီကို စာနယ်ဇင်းက ဒါတွေကို မဖော်ပြဘူး။ ကိုယ့်တိုင်းပြည်အကြောင်း မကောင်းတဲ့ သတင်းတွေ ပေးမိရင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေ၊ ခရီးသွားဧည့်သည်တွေကို မလာအောင် တားသလို ဖြစ်မှာစိုးလို့ မထည့်ကြတာပဲလို့ သူက သုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် တောင်အာဖရိက စာနယ်ဇင်းဆရာများသည်လည်း မျိုးချစ်စိတ် ရှိသင့်တယ်။ ရာဇဝတ်မှုခင်းသတင်းကိုသာ အသားပေး မဖော်ပြထိုက်ဘူး ဘာညာ၊ သူက လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဇူးမားက စာတအုပ်တည်းသမား၊ ဒါမှမဟုတ် သူဖတ်ချင်တဲ့ သတင်းစာ တစောင်တည်းသာ ကွက်ဖတ်ပြီး ကောက်ချက်ချတာပါ။
သူမသိတာက မက္ကဆီကို ပရင်းဆား ရိုခဟား (prensa roja) လို့ ခေါ်တဲ့ အနီရောင်စာနယ်ဇင်း (ဝါ) အန္တရာယ် များတဲ့ စာနယ်ဇင်းအတွက် ရာဇဝတ်မှု သတင်းတွေကသာ အသက်သွေးကြောပမာ ဖြစ်နေတာ၊ ထောင်ထဲ ရောက်နေတဲ့ မူးယစ်ရာဇာတွေပင်လျှင် သြဇာအရှိန်အဝါကြီးနေတဲ့ မူးယစ်ဆေး စစ်ပွဲတွေအကြောင်းကို လူပြိန်းကြိုက် သတင်းစာတချို့ကတောင် အားပါးတရ ဖော်ပြနေတာကိုပါပဲ။
မျိုးချစ်စိတ်ရဲ့ အကောင်းဆုံး အနက်အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုချက်
သည်နေရာမှာ မျိုးချစ်စိတ်ဆိုတာကို ဘယ်လို အနက်ဖွင့်မလဲ။
သဘောကျမိတဲ့ ဖွင့်ဆိုချက်ကတော့ ၁၈ ရာစု အင်္ဂလိပ် စာရေးဆရာ ဒေါက်တာ ဆယ်မြူယယ်(လ်) ဂျော်(န်)ဆင်(န်)ရဲ့ ဖွင့်ဆိုချက်ပါပဲ။
Patriotism is the last refuge ofascoundrel. တဲ့။
မျိုးချစ်စိတ် (မျိုးချစ်ဝါဒ)ဟူသည်ကား ကလိမ်ကကျစ်တို့၏ ကြံရာမရသည့်အဆုံး ခိုလှုံရာထွက်ပေါက်သာ ဖြစ်တော့သတည်းလို့ ဘာသာပြန်ရမယ် ထင်ပါတယ်။
သည်စကားကို ဂျော်(န်)ဆင်(န်) (၁၇၀၉-၁၇၈၄) က ၁၇၇၅ ခုနှစ် ဧပြီလ ၇ ရက်နေ့ ညနေခင်းမှာ ပြောခဲ့တာပါတဲ့။
ဟုတ်ကဲ့… သူ သည်စကားပြောခဲ့တာ ၂၄၄ နှစ်တောင် ကျော်ခဲ့ပါပြီ။ ဆင်ခြင်ဉာဏ်သာ အမှန်ရှိမယ်ဆိုရင် အဲဒီ့စကားဟာ သည်လောက်ကြာတဲ့တိုင် မှန်နေဆဲဆိုတာတော့ မြင်နိုင်ကြမယ် ထင်ပါတယ်။
ကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကန့်အသတ်တွေနဲ့သာဆိုရင်တော့ မျိုးချစ်စိတ်ဆိုဟာ လူထုအတွက် တကိုယ်ရေ သရုပ်လက္ခဏာ၊ နေရာတနေရာကို ရလာစေနိုင်ပြီး ဘုံကောင်းကျိုးကို ဖြစ်ထွန်းလာစေနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေသည့် ကျင့်ဝတ်မထိန်းဘူးဆိုရင်တော့ နိုင်ငံထဲက လူတချို့ကို ဖိနှိပ်ဖို့၊ ပထုတ်ဖို့အတွက်ရော၊ ဝေဖန်တာတွေကို ပါးစပ်ပိတ်သွားစေဖို့အတွက်ပါ အုပ်ချုပ်သူ အခွင့်ထူးခံတွေက အဲဒီ့မျိုးချစ်စိတ်ဆိုတာကြီးကို အလွဲသုံးစား လုပ်နိုင်ပါတယ်။
မျိုးချစ်စိတ် ပြင်းထန်သူများရဲ့နိုင်ငံအဖြစ် အလွန်ထင်ရှားတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ မိန်းကလေး တီးဝိုင်းအဖွဲ့ Dixie Chicks ရဲ့ ဖြစ်ရပ်က မျိုးချစ်စိတ်ရဲ့ အဆိပ်ပြင်းပုံအတွက် နမူနာကောင်းတခုပါပဲ။
အဲဒီ့ ကျေးလက်ဂီတ တီးဝိုင်းအဖွဲ့ထဲက မိန်းကလေးတွေဟာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ထက္ခဆက်(စ်) ပြည်နယ်သူတွေပါ။
၂၀၀၃ ခုနှစ် မတ်လ ၁၀ ရက်နေ့ ညခင်းမယ် အဖွဲ့က လန်ဒန်က ဇာတ်ရုံ တရုံမှာ သီဆို ဖျော်ဖြေပါတယ်။ အဲဒီ့အချိန်မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံဟာ အီရတ်နိုင်ငံကို ကျူးကျော် ဝင်ရောက်ဖို့ ပြင်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉ ရက်နေ့မှာ တကယ် ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ သမ္မတ ဂျော့(ခ်ျ)ဘွတ်(ရှ်)ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ပါ။
သူတို့ရဲ့ သီချင်းသစ်ဖြစ်တဲ့ ‘ခရီးသွားနေတဲ့ စစ်သား’ဆိုတဲ့ သီချင်းကို မသီဆိုခင်မှာ အဆိုတော်ထဲက Natalie Maines က သီချင်းကို မိတ်ဆက်ရင်း ပြောလိုက်တဲ့ စကားကတော့ “အားလုံး သိတော်မူတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ ကျမတို့သည် သည်က ပရိသတ်ကြီးအားလုံးနဲ့အတူ ကောင်းတဲ့ဘက်မှာပဲ ရပ်နေပါတယ်။ သည်စစ်ပွဲ၊ သည် အကြမ်းဖက်မှုကို ကျမတို့ မလိုလားပါဘူး။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ သမ္မတဟာ တက္ခဆက်(စ်) ပြည်နယ်က ဖြစ်နေတဲ့ အတွက် ကျမတို့ ရှက်မိပါတယ်”တဲ့။
သူတို့စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်း အဲသလို ပြောချလိုက်တာက ပြဿနာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြဿနာက တခြားနိုင်ငံကို ရောက်နေချိန်မှာ ပြောချလိုက်တာမို့ပါပဲ။
နိုင်ငံရေးသမားက နိုင်ငံရေးသမား၊ နိုင်ငံတော်က နိုင်ငံတော်
သူတို့ ဝေဖန်လိုက်တာက နိုင်ငံ(တော်)ကို မဟုတ်ဘူး။ နိုင်ငံ(တော်)ရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို ဆန့်ကျင်ပြီး မလိုအပ်တဲ့ စစ်ပွဲကို ဖန်တီးလိုက်ခြင်းအားဖြင့် နိုင်ငံတော်ကို သစ္စာဖောက်ရာရောက်တယ်လို့ သူတို့ ခံစားရတဲ့ နိုင်ငံရေးသမား တယောက်ကို ဝေဖန်တာသာ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ပြည်ပမှာ သည်စကား ပြောတာမို့ သည်အဆိုတော်တွေဟာ ဖြင့်ရင် မျိုးချစ်စိတ်ကင်းမဲ့တယ်လို့ ယူဆကြပါတော့တယ်။
ဘူ(လ်)ဒိုဇာနဲ့တောင် ထိုးတာနော်… ဒါပေမယ့်…
သည်မှာတင် သူတို့ကို အရေးယူကြပါတော့တယ်။ အစိုးရကတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့နဲ့ တပြည်နယ်တည်းသားတွေက အရေးယူတာပါ။ “သစ္စာဖောက်”တွေကို သပိတ်မှောက်ကြတော့တာပေါ့။
သူတို့ ပရိသတ်တွေက သူတို့ သီချင်းတွေကို မဝယ်တော့ဘူး။ အသံလွှင့်ရုံတွေကလည်း သူတို့သီချင်းတွေကို မလွှင့်တော့ဘူး။ ဒါတင် ဘယ်ကဦးမလဲ။ လူထု ပန်းခြံထဲမယ် အဲဒီ့ တီးဝိုင်းရဲ့ သီချင်း ဓာတ်ပြား (စီဒီ) တွေကို ဘူ(လ်)ဒိုဇာနဲ့ ထိုးပြီး ဖျက်ဆီးတာတွေအထိ လုပ်ခဲ့ကြပါတော့တယ်။
မျိုးချစ်စိတ်နဲ့ ဆွလိုက်ရင် ဘယ်လောက်အထိ ပါသွားနိုင်လဲဆိုတာကို သည်ဖြစ်ရပ်က သက်သေထူနေပါတယ်။
ကနေ့အခါမှာတော့ အီရတ်စစ်ပွဲဟာ မလိုအပ်သလို အမှားကြီး မှားသွားခဲ့ပြီဆိုတာ အမေရိကန်အများစုက လက်ခံနိုင်နေကြပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ဟို တီးဝိုင်းအဖွဲ့ကတော့ အီနေအောင် ခံခဲ့ရဖူးတာလည်း အမှန်ပါပဲ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဖော်၊ တခြားသူတွေကို ဆော်တဲ့ ဂျင်ဂိုအစ်ဇင်(မ်)
နိုင်ငံတော် သစ္စာ စောင့်သိရိုသေခြင်းကနေ တခြားနိုင်ငံက လူတွေအပေါ် ရန်လိုတာ၊ အပြင်းအထန် ဆန့်ကျင်တာတွေလည်း ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ မျိုးချစ်တယောက်အနေနဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံကို မြှင့်တင်ရင်း တခြားနိုင်ငံတွေကို နှိမ်ဖြစ်နေပါတော့မယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ သုခချမ်းသာကို လူသားတွေရဲ့ သုခချမ်းသာထက် ပိုပြီး ဦးစားပေးဖြစ်ပါတော့မယ်။
ဒါဟာ ကျင့်ဝတ်ပိုင်း အကန့်အသတ်ကင်းမဲ့တဲ့ မျိုးချစ်စိတ်ရဲ့ သဘာဝပါပဲ။ အဲဒီ့မှာတင် မျိုးချစ်စိတ် patriotism နံရံပါးပါးလေးတချပ်သာ ခြားတဲ့ jingoism ဖြစ်လာတော့တာပဲ။ မြန်မာစာအဖွဲ့ထုတ် မြန်မာအဘိဓာန်မှာတော့ jingoism ကို တက်ကြွရိုင်းစိုင်းသော မျိုးချစ်စိတ်၊ စစ်သွေးကြွ ဇာတိမာန်လို့ ဖွင့်ဆိုပေးထားပါတယ်။
အဲဒီ့ စစ်သွေးကြွဇာတိမာန်ဟာ ဖျက်လိုဖျက်ဆီးနိုင်လှတဲ့ မျိုးချစ်စိတ်ပါပဲ။ ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ အမျိုးသားရေးဝါဒ၊ လူမျိုးကြီးဝါဒတို့ရဲ့ မူလဘူတလို့လည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်။
သူစိမ်းကြောက်ရောဂါ၊ တခြားနိုင်ငံသားတွေကို ကြောက်တဲ့ ရောဂါကို အရှိန်ပိုတက်စေတတ်သလို စစ်မီးလျှံတွေကို ယပ်ခတ်ပေးတာလည်း အဲဒီ့ ဂျင်ဂိုအစ်ဇင်(မ်)ဆိုတဲ့ စစ်သွေးကြွဇာတိမာန်ပါပဲ။
အမေရိကန်မျိုးချစ်စိတ်၊ အမေရိကန် စစ်သွေးကြွ
မျိုးချစ်စိတ်က စစ်နဲ့ အနီးကပ် ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ဂျင်ဂိုအစ်ဇင်(မ်)ကတော့ ပိုတောင်ဆိုးပါတယ်။ စစ်သွေးကြွ ဇာတိမာန် တက်ကြွနေသူရဲ့ အမြင်မှာ ကိုယ့်အလိုလည်းမပါဘဲ မတော်တဆ မွေးလာတဲ့ နယ်မြေချင်းမတူ ဖြစ်နေတဲ့ တခြားသူတွေကို ရန်သူ၊ ကိုယ်နဲ့ ဘဝတူ လူသားမဟုတ်ဘူးအထိ မြင်နေကြစမြဲပါ။ ဂျင်ဂိုအစ်ဇင်(မ်)ဟာ တဖက်သားကို နှိမ်လိုတဲ့၊ တဖက်သားရဲ့ လူ့သိက္ခာကို ချိုးဖဲ့လိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်ပါပဲ။ မှားမှား မှန်မှန်၊ ဒါ ငါ့နိုင်ငံဆိုတဲ့ အမြင်နဲ့ အဲဒီ့ ဝါဒကို ထောက်မထားပါတယ်။
အဆိုးဆုံးကတော့ ဘုရားသခင်က ရွေးချယ်ထားတဲ့ လူထုဆိုတဲ့ ယုံတမ်းကို ဂျင်ဂိုအစ်ဇင်(မ်)က အားဖြည့်ပေးပါတယ်။ ဘုရားသခင်က ရွေးထားတဲ့လူထုဆိုတာက ကိုယ်မွေးလာတဲ့ အခြမ်းဘက်မှာသာ ဘုရား ရှိတယ်ဆိုတဲ့ အမြင်ပါပဲ။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ့်နိုင်ငံက တခြားနိုင်ငံက မိန်းမတွေ၊ ကလေးတွေ၊ မိသားစုတွေ၊ မင်္ဂလာဆောင်တွေ စိစိညက်ညက်ကြေအောင် လူမပါတဲ့ ဒရုန်းတွေနဲ့ သွားဗုံးကျဲဦးတောင်မှ ကိုယ့်နိုင်ငံကသာ တရားနည်းလမ်းကျတယ်လို့ မြင်နေတာပါ။ (အမေရိကန်တွေမှာ အဲဒီ့ စိတ်အလွန်ပြင်းတာ သမိုင်းက သက်သေခံခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒါ ဘာသာပြန်သူ့ စကားချပ်ပါ။)
နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ ပါးစပ်ထဲက မျိုးချစ်စိတ်
နိုင်ငံရေးသမားတွေ ပြောတဲ့ မျိုးချစ်စိတ်ဆိုတာ အဆိပ်ပြင်း၊ အန္တရာယ်များတဲ့ မူကို ဆိုလိုပါတယ်။ တနည်းပြောရင် သူတို့အနေနဲ့ နိုင်ငံသားတွေကို ယဉ်ပါးအောင် ကျုံးသွင်းဖို့အတွက် လိုသလို ချယ်လှယ်နိုင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူထုအကျိုးစီးပွားထက် အုပ်ချုပ်သူအခွင့်ထူးခံတွေရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို ပိုဇောင်းပေးတဲ့ ဥပဒေတွေ၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေ၊ အမူအကျင့်တွေကို လိုက်နာအောင် မျိုးချစ်စိတ်ကို နိုင်ငံရေးသမားတွေက ခုတုံးလုပ်တတ်ကြပါတယ်။
ကိုယ့်နိုင်ငံက မှားနေနေ၊ မှန်နေနေ၊ နိုင်ငံတော်က ကမကထပြုတဲ့ မျိုးချစ်စိတ်ရဲ့ သီးခြား ဓလေ့စရိုက်၊ သွင်ပြင် လက္ခဏာကတော့ အာဏာရနေတဲ့ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေ စိတ်တိုင်းကျ ဖွင့်ဆိုထားတဲ့ နိုင်ငံတော်၊ အစိုးရ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ တန်ဖိုးထားမှုတွေကို ချစ်မြတ်နိုးရမယ်ဆိုတာပါပဲ။
အဲဒီ့ မျိုးချစ်စိတ်ကနေ စည်းလုံးညီညွတ်ရေးတို့၊ နိုင်ငံတော် တည်ဆောက်ရေးတို့နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကြွေးကြော်သံတွေ ပေါက်ဖွားလာခဲ့တာပါ။ အဲဒီ့ကြွေးကြော်သံမျိုးတွေကို တောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ကြားခဲ့ကြသလို လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်လှစ်ဟခွင့်ကိုလည်း ပျက်စီးသွားစေခဲ့ပါတယ်။
စည်းလုံးညီညွတ်ရေး၊ နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးဟာ ဘယ်ကဲ့သို့ ဘယ်ချမ်းသာဆိုပြီး စီရင်ဆုံးဖြတ်ပေးသူတွေဟာ နိုင်ငံရေးသမားတွေ၊ နိုင်ငံတော် ဝန်ထမ်းတွေ ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဖြင့် ပင်ကိုအားဖြင့် အကောင်းဘက်ဆောင်တဲ့ သည်ရိုးရိုးသားသား သဘောတရားတွေဟာ အန္တရာယ်ကြီးလာပါတော့မယ်။ သည်လိုနဲ့ အမျိုးသမီးချင်း ပွေ့ဖက်ထားတဲ့ ပုံ၊ တမူထူးခြားတဲ့ မျက်နှာ၊ ကိုယ်ခန္ဓာတွေကို မြင်သာအောင် ပြတဲ့ တခြားပုံတွေကို ရိုက်ကူး ခင်းကျင်းပြသတဲ့ နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု ဓာတ်ပုံဆရာရဲ့ ပုံတွေကို နိုင်ငံရေးသမားတို့၊ အနုပညာနဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးတို့က ရှုံ့ချပြတာတွေ မြင်လာရတော့တာပါပဲ။
အနုပညာမှာလည်း ဝင်ရှုပ်တာ နိုင်ငံရေးသမားပါ
လိင်တူချင်းတပ်မက်သူ အခွင့်အရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူလည်း ဖြစ်လေတဲ့ ဓာတ်ပုံဆရာ ဇန္နဲ(လ်) မူဟိုလီရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို ကမ္ဘာ့ မြို့ကြီး အများအပြားမှာ ပြသခဲ့ပြီး ချီးကျူးကြတဲ့သူတွေကလည်း အုတ်အော်သောင်းသဲပါ။ အနုပညာ နက်ရှိုင်းမှုနဲ့ အလှကြောင့် ပညာရှင်တွေတောင် ရင်သပ်ရှုမောခဲ့ရတဲ့ လက်ရာတွေပါပဲ။
ဒါပေမယ့် လွတ်လပ်သွားပြီလို့ဆိုတဲ့ တောင်အာဖရိကနိုင်မှာတော့ မျက်နှာပြောင်တိုက်သူ (နိုင်ငံရေးသမား အမျိုးသမီး) နိုင်ငံရေးသမ လူလူး ဇင်ဂွာဟာကတော့ အဲဒီ့အချိန်က အနုပညာနဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဖြစ်နေခဲ့ပြီး ဇန္နဲ(လ်)ရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေဟာ စည်းလုံးညီညွတ်ရေး၊ နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေး တန်ဖိုးထားမှုတွေနဲ့ ဆန့်ကျင်နေပါတယ်လို့ အမိန့်တော်မြတ် ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။
သည်ဝန်ကြီးက စီရင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို ယူခဲ့သလို သူ့တကိုယ်ရေ တန်ဖိုးထားမှုတွေကို ထင်ဟပ်နေတဲ့ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွေကို ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ လိင်တူချင်း ချစ်တာကို ခွင့်ပြုထားတဲ့ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေ (ဖွဲ့အုပ်ဥ)ထဲမှာ အမြတ်တနိုး ထည့်သွင်းထားတဲ့ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့် တန်ဖိုးထားမှုတွေနဲ့ ဆန့်ကျင်နေလင့်ကစား သည်ဝန်ကြီးမ ပါးစပ်ကထွက်တဲ့ သူ့တကိုယ်ရေ တန်ဖိုးထားမှုတွေက အလိုလိုနေရင်း နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ တန်ဖိုးထားမှုတွေ ဖြစ်ကုန်တယ်။
မျိုးချစ်စိတ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်အောက်မှာ သက်ဆိုင်ရာ အနုပညာအသီးသီးသည်လည်း နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ စည်းလုံးညီညွတ်ရေး၊ နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးကို ပံ့ပိုးပေးရမယ်လို့ နိုင်ငံတော်ကလည်း အမိန့်တော် မှတ်ချ လိုက်ပါတော့တယ်။ သည်စိတ်ဓာတ်အတိုင်း မရှိတဲ့ အနုပညာသည်တွေ၊ ဒါမှမဟုတ်လည်း စည်းလုံးညီညွတ်ရေး၊ နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးရဲ့ အနက်အဓိပ္ပာယ်၊ လက်တွေ့အသုံးချပုံတို့ကို တခြားနည်းနဲ့ နားလည်ထားတဲ့ အနုပညာသည်တွေကိုဆိုရင်တော့ မျိုးချစ်စိတ်မရှိဘူးလို့ ယူဆကြပါတော့တယ်။
ဒါဟာဖြင့် အဂတိလိုက်စားသူ (အဂတိလေးပါးစလုံးထဲက တပါးပါးကို ဆိုလိုပါတယ်။ လာဘ်စားတာ တခုတည်း မဟုတ်ပါ။) နိုင်ငံရေးသမားများအတွက် အားကိုးရာ ဖြစ်လာတဲ့ မျိုးချစ်စိတ်အမျိုးအစားပါပဲ။
အဲဒါတွေထက် သာလွန် မြင့်မြတ်တဲ့ မျိုးချစ်စိတ်
ဒါပေမယ့်လည်း တဖက်မှာ ကိုယ့်နိုင်ငံကို နှိုင်းနှိုင်းချင့်ချင့် ချစ်တဲ့စိတ်ကို မွေးမြူသလို ဘာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ် သစ္စာရှိမ ယ် ဆိုတဲ့ သဘောထားကိုလည်း ဆန့်ကျင်တဲ့ မျိုးချစ်စိတ်သဘောတရား နောက်တခုလည်း ရှိပြန်ပါသေးတယ်။ အဲဒါကိုတော့ အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ် ဂျိမ်း(မ်)(ဇ်) ဝစ်လျံ(မ်) ဖှူး(လ်)ဘရိုက်(ထ်) (၁၉၀၅-၁၉၉၅) က ရေးပြခဲ့ပါတယ်။
“မိမိနိုင်ငံအား ဝေဖန်ခြင်းသည် နိုင်ငံကို အလုပ်အကျွေးပြုခြင်းဖြစ်သလို နိုင်ငံကို ချီးကျူးဂုဏ်ပြုခြင်းလည်း မည်ပါသည်။ နိုင်ငံအား လက်ရှိလုပ်ဆောင်နေသည်ထက် ပိုကောင်းအောင် လုပ်ဆောင်ရန် နှိုးဆော်ရာ ရောက်သဖြင့် အလုပ်အကျွေးပြုခြင်းဟု ဆိုရခြင်းဖြစ်ပေသည်။ … တိုတို ပြောရလျှင် ဝေဖန်ခြင်းသည် အခွင့်အရေး တရပ်သာမကဘဲ မျိုးချစ်စိတ်၏ အပြုအမူသာ ဖြစ်ပေသည်။ ဤနေရာတွင် မျိုးချစ်စိတ်ဟူသည်မှာ ရင်းနှီးပြီးသား ဓလေ့ထုံးစံများ၊ ကိုယ့်နိုင်ငံကိုယ် လွန်လွန်ကဲကဲ မြှောက်စားခြင်းများထက် သာလွန်မြင့်မြတ်သော မျိုးချစ်စိတ်ပုံစံဟု ကျနော် ယူဆပါသည်”ဟူလို။
မူရင်း ဆောင်းပါးက အရှည်ကြီးပါ။ မဆုံးသေးပါဘူး။ ဒါက ပထမပိုင်းထဲက ကျနော် တတ်နိုင်သလောက် ကောက်နုတ် ပြန်ဆိုထားတာသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယပိုင်း ကျန်ပါသေးတယ်။
မူရင်းကို သည်မှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ https://city-press.news24.com/…/Do-we-need-patriotic-journa…
အာဖရိကနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ ဇင်ဘာဘွေမှာလည်းပဲ မျိုးချစ် စာနယ်ဇင်းဆိုတာ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း အော့(ခ်)(စ်)ဖှာ့(ဒ်) တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခတယောက်ရဲ့ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ စာတမ်းတစောင် တွေ့မိပါတယ်။ “ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံတွင် မျိုးချစ်စာနယ်ဇင်းပေါ်ပေါက်လာခြင်းနှင့်တကွ ယင်း၏ အကျိုးဆက် အလားအလာများ”တဲ့။ ဝါသနာပါပြီး အင်္ဂလိပ်လို ဖတ်နိုင်ရင် https://bit.ly/2YFsscE ကနေ ရယူဖတ်ရှုနိုင်ကြပါလိမ့်မယ်။
အာဖရိကတိုက်မှာက နိုင်ငံအတော်များများက အာဏာရှင်နိုင်ငံတွေ ဖြစ်ကြတာ အားလုံး အသိလို့ ထင်ပါတယ်။ နောက်တခုက သူတို့ရဲ့ လူမျိုးစရိုက်။ လက်နက်အားကိုးနဲ့ ဗိုလ်ကျချယ်လှယ်တတ်ကြတဲ့ (လူရိုင်း) စရိုက်က သူတို့ သွေးသားထဲမှာ စွဲနေပါတယ်။ အဲတော့ နိုင်ငံရေးသမားတွေ ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလည်း ထုံးစံအတိုင်း အာဏာကို မက်လာတယ်။
အာဏာကို ဖက်တွယ်ထားနိုင်ရေးမှာ စကားလုံးလှလှတွေ ရှာလိုက်တဲ့အခါ နောက်ဆုံး အားကိုးရာအဖြစ် မျိုးချစ်စိတ်ဆိုတာကြီးကို သွားတွေ့ကြတယ်။ သည်မှာတင် “မျိုးချစ်စာနယ်ဇင်း”ဆိုတာကိုပါ သူတို့အကျိုးစီးပွားအတွက် ချသုံးလာကြတယ်။ အဲလိုပဲ သုံးသပ်မိပါတယ်။
အဆုံးပိုင်းက အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ် ပြောသွားတဲ့ သာလွန်မြင့်မြတ်တဲ့ မျိုးချစ်စိတ်ကို ကျနော်ဖြင့် နှစ်သက် မဆုံးဘူး။
အမေရိကန်တွေ မျိုးချစ်စိတ်လွန်ကဲနေတာ အထက်မှာ ဖြစ်ရပ်ဥပမာနဲ့ အထင်အရှား ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ သို့ပေတည့် လွှတ်တော်အမတ်ရဲ့ အတွေးအမြင်မျိုးကတော့ တွေ့ရခဲလှလို့ ထင်မိပါတယ်။
ကျနော်လည်း မျိုးချစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံချစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်ချစ်တာက သူပြောသလိုပါ။ နိုင်ငံကို အလုပ်အကျွေးပြုလိုတဲ့ စေတနာနဲ့ ချစ်တာပါ။ တခြားသူတွေ၊ ကိုယ်နဲ့မတူသူတွေကို မုန်းတီး ရန်လိုတဲ့ စိတ်မျိုးနဲ့ ချစ်မိတာ မဟုတ်ပါဘူး။
စာဖတ်သူ လူကြီးမင်းကရော… ဘယ်လို စိတ်မျိုးနဲ့ ချစ်ချင်တာပါလဲ။
စာဖတ်သူ လူကြီးမင်းရဲ့ သားသမီး မြေးမြစ်တွေကိုရော ဘယ်လို စိတ်မျိုးနဲ့ မျိုးချစ်တတ်အောင် သွန်သင်ခဲ့ချင်ပါသလဲ။
ဘာကိုပဲ ဆုံးဖြတ်ဆုံးဖြတ် စာဖတ်သူ လူကြီးမင်းကို လေးစားပါတယ်။
တခုပါပဲ။ ကျနော့်စာလေးကို ဖတ်ပြီး အလေးအနက် တချက်လောက် စဉ်းစားကြည့်ပေးရင်ပဲ ဒါတွေကို ကျနော် ရေးရကျိုးနပ်ပြီလို့ အောက်မေ့လိုက်ပါရစေတော့ခင်ဗျား။
Author lettwebawPosted on5August 20195August 2019 Categories Discussion, Patriotism, Politics1 Comment on ချစ်နည်းလေးတွေ မှန်စေ့ချင်မိ…
တချက်စီ ဖတ်ကြည့်၊ ဆင်ခြင်ကြည့်ပြီး စဉ်းစားကြရအောင်လားဗျာ။
1. မှားတာ မှန်တာကို ဂရုမထားတော့တာ။
2. တခြားသူတွေအပေါ်မှာ အမြတ်ထုတ်ဖို့ တချိန်လုံး လိမ်လည် လှည့်ဖျားနေတာ
3. တဖက်သားအပေါ်မှာ စာနာစိတ်ကင်းမဲ့တာ၊ အပြစ်မြင်တာ၊ မလေးစားတာ
4. ကိုယ်လိုချင်တာ ရဖို့၊ ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာဖို့ တဖက်သားကို ချယ်လှယ်နိုင်အောင် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သူ့အရည်အသွေးကိုဖြစ်စေ၊ ဇဝနဉာဏ်ကိုဖြစ်စေ သုံးတတ်တာ
5. လူတတ်လုပ်တာ၊ တခြားသူတွေထက် သာတယ်လို့ ယူဆနေတာ၊ ကိုယ့်အယူအဆမှ အမှန်ဆိုပြီး အသေကိုင်စွဲထားတတ်တာ
6. ခြိမ်းခြောက် အကြပ်ကိုင်တဲ့နည်း၊ ကလိန်ကျတဲ့နည်းနဲ့ တခြားသူတွေရဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို ချိုးဖောက်တာ
7. စိတ်လိုက်မာန်ပါ လုပ်တတ်တာ၊ ဒါမှမဟုတ် ရှေ့အတွက် ကြိုမစဉ်းစားတာ
8. ရန်လိုတာ၊ သိသိသာသာ အကဲဆတ်လွယ်တာ၊ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်လွယ်တာ၊ ခိုက်ရန်ဒေါသစိတ်ကြီးတာ၊ အကြမ်းဖက်တာ
9. တဖက်သားနေရာက နေမပေးတတ်တဲ့အပြင် တခြားသူတွေကို ဒုက္ခပေးမိလို့လည်း နောင်တမရတတ်တာ
10. ကိုယ့်အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တခြားသူတွေအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဘေးကင်းကင်း မကင်းကင်း မလိုအပ်ဘဲ စွန့်စားလို၊ ရမ်းကားလိုတဲ့ အမူအကျင့်
11. အိမ်ထောင်ရေး၊ အချစ်ရေးမှာလည်း အဆင်မပြေတာ၊ ဒါမှမဟုတ် နိုင်လိုမင်းထက်လုပ်တတ်တာ
12. ကိုယ့်အမူအကျင့်ရဲ့ အကျိုးဆိုးတွေကို ထည့်စဉ်းစားဖို့ဖြစ်ဖြစ်၊ အဲဒီ့အကျိုးဆိုးတွေကို သင်ခန်းစာယူဖို့ဖြစ်ဖြစ် စိတ်ကို မဝင်စားတာ
13. တချိန်လုံး တာဝန်မဲ့တာ (ဖြစ်လာသမျှ ငါလုပ်လို့ဆိုပြီး တာဝန်ယူချင်စိတ်မရှိတာ)အပြင် အလုပ်တာဝန်၊ (ပေးဆပ်ရမယ့် တာဝန်လိုမျိုး) ငွေကြေးတာဝန်တွေကို တချိန်လုံး ပျက်ကွက်နေတာ
ကျနော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အဲသလို လူတွေ တွေ့ဖူးပါသလားလို့ မေးရင် လူကြီးမင်း ဘယ်လို ဖြေမလဲလို့ သိချင်လိုက်တာ။
ပထမ ခုနစ်ချက် (၁ ကနေ ၇) အထိတော့ ကျနော့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ နေ့စဉ်တွေ့မြင်နေရသလိုပါပဲ။ မယုံဘူးလားခင်ဗျာ။ လမ်းပေါ်ကို ထွက်ပြီး ကားစီးကြည့်လိုက်ပါ။ ၁ ဖြစ်တဲ့ အမှား အမှန်ကို ဂရုမစိုက်တာလည်း တွေ့ပါလိမ့်မယ်၊ ၂ ကိုတော့ ယာဉ်မောင်းတွေဆီမှာ မတွေ့ရဘူးပဲ ထားပါ၊ ၃ ဆိုတဲ့ တဖက်သားကို မစာနာတဲ့ စိတ်တွေလည်း ထင်းထင်းကြီးတွေ့ရ ပါလိမ့်မယ်၊ ၅ ဖြစ်တဲ့ သူက ပိုမောင်းတတ်သလို အမူအကျင့်ကိုလည်း တွေ့ရဦးမှာပါ၊ ၆ – ခြိမ်းခြောက် အကြပ်ကိုင်တဲ့နည်း၊ ကလိန်ကျတဲ့နည်းနဲ့ တခြားသူတွေရဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို ချိုးဖောက်နေတာရယ်၊ ၇ – စိတ်လိုက်မာန်ပါ လုပ်တာရယ်လည်း ခရီးသည်တင် ယာဉ်မောင်းတဲ့သူများမှသည် ကားအကောင်းစားကြီး မောင်းနေတဲ့သူတွေဆီမှာပါ တွေ့ရတဲ့ အမူအကျင့်ပါ။ ဟုတ်ကဲ့လား မသိဘူး။
ကားနဲ့ ဝေးပါတယ်ဆိုရင် တန်းစီရတဲ့ နေရာတွေမှာလည်း အဲလို လူမျိုးတွေ တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။
မြန်မာ့စောက်ရှက်လက်(စ်) လမ်းစဉ်ဖာထီက ပေးခဲ့တဲ့ အမွေဆိုးကတော့ “ငတေစိတ်”ပါပဲ။ ဘယ်သူသေသေ ငတေမာရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်မို့ “ငတေစိတ်”လို့ အနွတ္ထသညာ ပြုလိုက်ရတာပါပဲ။ ကိုယ်အနေချောင်ဖို့၊ ကိုယ် ကောင်းစားဖို့သာ အဓိက၊ ကျန်တဲ့သူ ဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်အမွေဆိုးကို ဗိုလ်နေဝင်းရဲ့မဟာလမ်းစဉ်က ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဗိုလ်နေဝင်းကို မုန်းတယ်လို့ ပြောကြသူတွေ ကိုယ်နှိုက်က ဗိုလ်နေဝင်းထားခဲ့တဲ့ စိတ်ဓာတ်အမွေကို ပျော်ပျော်ကြီး ဆက်ခံ ကျင့်သုံးနေကြတာ ရယ်စရာ အလွန်ကောင်းလှပါတယ်နော်။ သူ့ကို ဘုရားလို ကိုးကွယ်ခဲ့သူတွေမှာဆို သည့်ထက် ပိုဆိုးမှာဆိုတာလည်း တွေးမိရပါတယ်။
အမယ်… ဘာတဲ့။ “မကောင်းနိုင်ရင် ကင်းအောင်နေ၊ မကင်းနိုင်ရင် ကောင်းအောင်နေ”ဆိုတဲ့ သြဝါဒ ရွှေတလွဲကိုတောင် ချတဲ့သူက ချနေကြသေး။ “မကင်းနိုင်ရင် ကောင်းအောင်နေ”ဆိုတာက တကယ်တော့ သည်မောင်တွေနဲ့ မကင်းနိုင်ဘူးလား၊ မကင်းနိုင်လို့ရှိရင် သည်မောင်တွေ အလိုကျသာ မှားမှား မှန်မှန်၊ ဆိုးဆိုး ကောင်းကောင်း အလိုက်အထိုက်နေဖို့ သင်ပေးတဲ့ သြဝါဒ ရွှေတလွဲပါ။ သူခိုးဓားပြနဲ့ မကင်းနိုင်ရင် သူတို့လိုပဲ လိုက်ခိုး၊ လိုက်လု၊ လိုက်ဓားပြတိုက်ဖို့ သွန်သင်တဲ့ အဆိုအမိန့်။ အဲဒါကို “ကောင်းအောင်နေ”ဆိုတဲ့ သကာနဲ့ ဖုံးလိုက်တာ။
အဲဒါလည်း ဗိုလ်နေဝင်းလက်အောက်မှာ အနေချောင်သူတွေရဲ့ ပါးစပ်က ထွက်လာတဲ့ အဆိုအမိန့်ပါပဲ။ တနည်းအားဖြင့် “ငတေစိတ်”ကို အားပေးအားမြှောက် ပြုနေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာ ထင်ရှားစေတဲ့ အဆိုအမိန့်ပေါ့။
“လူမှုရေးခေါင်းပါးတဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး စံလွဲမှု”
ဗိုလ်နေဝင်းနဲ့ သူ့မြန်မာ့စောက်ရှက်လက်(စ်) လမ်းစဉ်ဖာထီ တရားဝင် ကျဆုံးသွားခဲ့တာ ၁၉၈၈ ခုနှစ်က ဆိုတော့ အခုဆို ၃၁ နှစ်၊ မျိုးဆက်တဆက်စာတောင် ရှိခဲ့ပြီ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ့မျိုးဆက်က လက်ဆင့်ကမ်းခဲ့တဲ့ “ငတေစိတ်” အမွေအနှစ်ကတော့ ကျနော်တို့ လူ့ဘောင်မှာ တွင်ကျယ်နေဆဲပါပဲ။ ဟုတ်ကဲ့လား မသိဘူး။
အထက်က ဖော်ပြခဲ့တဲ့ အချက် ၁၃ ချက်ဟာ တကယ်တော့ “လူမှုရေးခေါင်းပါးတဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး စံလွဲမှု” (Antisocial Personality Disorder) စိတ်ဝေဒနာရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေပါ။
ခက်တာက အဲဒီ့ရောဂါလက္ခဏာတွေဟာ ကြီးကြီးမာစတာများမှသည် အောက်ခြေဝန်ထမ်းများအထိ၊ အစိုးရ လုပ်ငန်းများမှသည် ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းများအထိ၊ ပညာတတ်ကြီးများမှသည် ပညာမဲ့များအထိ ရှိရှိလေသမျှ လူထု လူတန်းစား အလွှာအသီးသီးမှာ လှိုက်စားနေတယ်လို့ မြင်မိရပါတယ်။
အဲဒီ့ “ငတေစိတ်”တွေ၊ အဲဒီ့ စံလွဲ စိတ်ဝေဒနာတွေ အရင့်အမာ အမြစ်တွယ် ချိုးကပ်နေတဲ့ လူ့ဘောင်ကို ကုနိုင်ပါဦးမလား။ ကျနော်ကတော့ တယ်မထင်မိတော့ဘူး။
ကိုယ့်ရင်သွေးလေးတွေ ရှေ့မှာ ကိုယ်နိုင်လို့ ရတဲ့သူကို မစာမနာ မထောက်မထားဘဲ တအားအနိုင်ကျင့်ပြလိုက်တာ၊ ခံလာလို့ကတော့ ဆော်ပြီသာမှတ်၊ ချစရာရှိရင် ကိုယ်က ဦးအောင် တီးလာခဲ့လို့ ကလေးတွေကို သွန်သင်နေကြတာ၊ သူတပါးကို လိမ်လည်လှည့်ဖျားပြီး ကိုယ်ကျိုးရှာပြနေကြတာများဟာ မျိုးဆက်တဆက်က နောက်တဆက်ဆီ အကျအန လက်ဆင့်ကမ်းပေးနေတဲ့ “ငတေစိတ်”အမွေတွေလေ။
အဲတော့လည်း အဲသလို လူ့ဘောင်ကို အဖတ်ဆယ်ဖို့ ကြိုးစားသူဟာ ရူးနေသူပဲပေါ့။ စံလွဲစိတ်ဝေဒနာရှင် ၁၀၀ ကြားမှာ လူမှန်တယောက်အတွက် နေရာမှ မရှိတာပဲလေ။
သည်လိုနဲ့ ကျနော်သည်လည်း ရွာပြင်မှာပဲ ထွက်ထိုင်နေမိရပါတော့တယ်။
Author lettwebawPosted on 30 July 20195August 2019 Categories Discussion, Etiquette, Psychology1 Comment on အားလုံး ချမ်းသာကြပါစေ